Midlalo Ukutya Ukukhulula iintsuku I grapefruit
Isiqendu esilandelayo kukho isiqhamo esinokuthi ulahlekelwe ngumzimba ngokulula.
Inani lezondlo ezisetyenziswe ngabantu kutshanje kunzima ukubala. Ukwahlukana kwazo kubonisa ukuba inzululwazi ye-dietetics "iyahamba" ngendlela ehamba ngokukhawuleza kwaye ikhokelela inani elikhulu labantu abafuna ukugcina impilo ephilileyo.
Kungekude kudlulileyo kwaziwa ukuba ezinye izityalo kunye nemifuno esiyithandayo inefuthe elixabisekileyo emzimbeni-bayatshisa amafutha. Ngenxa yoko, zinokusetyenziswa kwisondlo sokutya. Ngoko, umzekelo, kwenzeke ngefestile. Ngoku kutshanje, esi siqhamo sinzima, singatsho, "samkelwe" oogqirha abandakanyekayo ekuphuhliseni ukutya. Kodwa i-physiologists, ngokulinganisa umxholo wekhalenda, kunye nokufunda isiphumo sayo emzimbeni, kwafika kwisigqibo sokuba lo mmeli we-citrus unemihlaba eninzi yezixhobo ezincedo. Ngokomzekelo, i-substance ekubunjweni kwayo (flavonoid naringenin) i-biostimulator yesibindi, leyo yandisa ukukhululwa kwe-bile, eyona mtshabalali wamafutha.
Umxholo we-calorie ophantsi we-grapefruit ngokuqhelekileyo ngenxa yokuba ukubunjwa kwawo, ngokuphindaphinda i-100 gram yemveliso eluhlaza, iqulethe kakhulu (0.9 g.) Iiprotheni, (0. 2 g.) Amafutha kunye nesityalo esincinci (6 g.). Ukuba ukhangela i-data yetafile yexabiso lamandla kwaye uthelekisa ixabiso le-calorific kunye nezinye iziqhamo, unokubona uluhlu oluqaqambileyo lwe-hybride, ebonakaliswe kukuba unomxholo ophantsi kakhulu wekhalori, eyi-35 kilocalories kuphela kwi-100 gram yesisindo. Kwaye i-rowan eqhelekileyo inexabiso eliphindwe kabini likhulu. Ukungaphantsi kwesiqhamo samagilebhisi kuphela i-lemon, enama-calorie angu-31. Ngokungathandabuzekiyo, ngokukhawuleza ukuba izazinzulu zifunde ixabiso le caloriki ngokufanelekileyo kwesi siqhamo, zagqiba ekubeni zisetyenziswe kwisondlo sokutya. Kwa kutshanje kubekho abantu abaninzi abafuna ukunciphisa ubunzima, ngelixa bengabandezeli ngendlala okanye ukutya okunzima. Kubantu abanjalo, ukutya kuphela kusekelwe kwi-grapefruit. Akusiyinkimbinkimbi kwisicelo sayo, kusebenza kakuhle kwaye kufumaneka lula. Nangona iindleko zesi siqhamo ngoku, ayifuni kwixabiso elincinci. Kodwa, njengoko besithi kubantu-impilo iyabiza.
Ekugqibeleni, kunokutsho ukuba umxholo wekhalori ophantsi kakhulu umqondiso nje wokutya, kwaye ngakumbi kulabo abayidingayo. Emva koko, kukho imizekelo emininzi kwihlabathi indlela esi siqhamo sondlo esenza ngayo ukulahleka kwesisindo.
Khawuleza ulahlekelwe isisindo: sebenzisa umzimba
Ngaba ndingasebenzisa ushizi, i-sausage cheese ngexesha lokutya?
I-Fly-Lady: inkcazo yokubonisa
Isaladi enengqolowa "Spring"
Iimonflei ze-Lemon kunye neepoppy imbewu
Imibongo yabantwana ngo-Matshi 8
I-recipe ye-classic ye-Classic Iimpahla ezilahlekileyo kunye ne-meringue nesithombe